Fialan-tsasatra - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Inona no ho hita ao Navarra
Any avaratr'i Espana no misy, Navarra dia vondrom-piarahamonina feno tanàna mahafinaritra ary harena voajanahary lehibe izay ...
Cudillero any Asturias
Ny mampiavaka ny tontolony, ny akaiky ny olony ary ny lova ara-kolontsaina mahaliana azy no mahatonga ny filankevitr'i Cudillero ...
Kilometatra vitsivitsy miala ny Ranomasina Mediteraneana sy eo am-pototry ny Valan-javaboary Nipoitra i Frigiliana, ilay hany tanàna ...
Santo Domingo de la Calzada dia tanàna mangina any La Rioja (Espana) izay eo amoron'ny reniranon'i Oja miaraka amin'ny ...
Benavente dia eo akaikin'i Toro sy Zamora, iray amin'ireo tanàna telo manandanja indrindra ao amin'ny faritanin'i Zamora. Ny maha-zava-dehibe azy…
Burgo de Osma dia tanàna tsara tarehy ao amin'ny faritanin'i Soria izay manana lova mahafinaritra sy sakafo matsiro.
Torohevitra fototra momba ny fivezivezena amin'ny fotoana voan'ny coronavirus
Aza adino ireo torohevitra fototra tsara indrindra amin'ny fandehanana amin'ny fotoanan'ny coronavirus. Mitandrema foana fa mankafy
Any atsimo andrefan'ny faritanin'i Valladolid i Medina del Campo dia tanàna nisy fiaviana talohan'ny Romana izay renivohiny ...
Albarracín, tanàna tsara tarehy indrindra any Espana
Ny faritanin'i Teruel dia iray amin'ireo faritany mandrafitra an'i Espana tsy misy fangarony. Toerana tsy dia fantatra loatra ho azy ...
San Vicente de la Barquera dia manolotra tontolo voajanahary mahafinaritra, tsangambato maro ary gastronomie matsiro mifototra amin'ny jono.
Barbastro dia tanàna kely feno tantara sy tsangambato izay manolotra ihany koa ny hatsaran-tarehy mahavariana sy ny sakafo matsiro.
Fetim-pirenena mahaliana ny mpizahatany
Ny festival malaza dia ao anatin'ny kolontsaina sy ny tantaram-bolan'ny olona isan-karazany mandrafitra faritra na ...
Manomboka any avaratra ka hatrany atsimo dia toerana be soso-kevitra i Eoropa hivezivezy miaraka amin'ny ankizy satria mifangaro mahafinaritra ...
Toerana hitsidika an'i Espana
I Espana no firenena fahatelo manerantany amin'ny fananana nambara fa Unisco ho lova manerantany ka ...
Robledillo de Gata dia vatosoa ao amin'ny faritanin'i Cáceres. Izy io dia mitazona ny maritrano nentin-drazana ary manome anao làlana fitsangantsanganana mahafinaritra.
Nosy La Graciosa
Ny nosy fahavalo amin'ny nosy Canary, La Graciosa, dia manana ny toetra ilaina rehetra handany andro vitsivitsy hanatsarana ny ...
Eo amoron'ny Ony Sella ary voahodidin'ny Picos de Europa, amin'ny toerana misy hatsarana tsy manam-paharoa hitanao ...
Toerana tora-pasika mora vidy indrindra
Vao nanomboka ny lohataona ary efa mieritreritra ny handany fahavaratra eny amoron-dranomasina ianao? Tamin'ny fotoana ...
Inona no ho hitanao ao Medinaceli
Roa ora monja amin'ny fiara avy any Madrid sy eny an-tampon'ny havoana Jalón no misy an'i Medinaceli, ...
Zavatra 12 tokony hatao any Palencia
Hitsidika an'i Palencia ve ianao? Mahita drafitra 12 hatao amin'ireo toerana mahazatra indrindra ao an-tanànan'i Palencia izay tsy azonao adino. Fantatrao daholo ve?
Inona no jerena ao Palencia?
Miditra ao Palencia izahay, ao amin'ity tanàna milamina ity, mba hahafahanao mijery ireo drafitra sy toerana tsara hotsidihina.
Ny fitehirizan-drano San Juan dia fantatry ny maro amin'ny morontsiraky Madrid. Amin'ity toerana ity dia misy 52 ...
Fitsangatsanganana any Roma miaraka amin'ny ankizy
Ankehitriny ny fianakaviana tanora dia mandeha miaraka amin'ny ankizy, ary maro no mihevitra fa tsy misy toerana eto amin'izao tontolo izao ...
Inona no jerena ao Mérida
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao an-tanànan'i Mérida, izay manana taolam-biby arkeolojika maro hatramin'ny andron'ny Fanjakana Romanina.
Atorinay anao izay rehetra azo jerena sy atao ao an-tanànan'i Valderrobres any Teruel, tanàna iray misy tantara be dia be.
Lazainay aminao ny zavatra rehetra izay azo jerena ao amin'ny tanànan'i Segura de la Sierra, izay manana tantara sy lova be dia be eny an-dalambe.
Ny renivohitr'i Espana dia manana lafiny maro toy ny manodidina azy. Ny tsirairay amin'izy ireo dia mampiseho endrika hafa an'i Madrid taloha ...
Inona no ho hitanao ao Soria
Any Castilla y León, azontsika atao ny mamaritra ny Soria ho renivohitra kely mitazona ny ankabeazany ...
Azo atao ve ny mandeha miaraka amin'ny ankizy any amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao? Mety hisy izany, misy tokoa ny fianakaviana adventurous, fa misy koa ny fianakaviana ...
Fialan-tsasatra amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy
Ny faran'ny herinandro dia fotoana mety indrindra hanaovana fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy. Na inona na inona fotoana ...
Tanàna lehibe indrindra any Espana
Madrid sy Barcelona no tanàna lehibe any Espana ary lehibe indrindra nefa tsy izy ireo ihany. Fitomboana…
Inona no hatao any Seville
Raha ny filazan'ny mpanonta malaza mpizahatany mpizahatany, Lonely Planet, Seville dia nekena ho tanàna tsara indrindra manerantany ...
Calahorra, renivohitr'i Rioja Baja, dia toerana kendrena gastronomika sy goavambe. Iray amin'ireo ...
Ny Congost de Mont-rebei dia hantsana mahatalanjona misy eo anelanelan'ny faritanin'i Lleida sy Huesca. Taona maro lasa izay dia toerana voajanahary izay nilazanay anao izay azo jerena ao amin'ny lava-bato Congost de Mont-rebei, eo anelanelan'ny Lleida sy Huesca, miaraka amina làlana voajanahary tsara tarehy.
Alcazar an'ny San Juan
Alcázar de San Juan dia tanàna kely nefa tsara tarehy any Ciudad Real. Manana tantara midadasika sy maro karazana ...
Teide National Park no lehibe indrindra amin'ny nosy Canary. Ny valan-javaboary iray manontolo dia harena ara-jeolojika miavaka, ...
Androany dia miverina mifantoka amin'i Espana isika, firenena izay manana toerana fizahan-tany tsy mampino. Mitady trano mimanda na katedraly ve ianao ...
Eo am-pototry ny tendrombohitra Montjuïc no misy ny CaixaForum, ivon-toeran'ny kolontsaina, sosialy ary fanabeazana vinavina ...
Fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro tantaram-pitiavana
Asehonay aminao izay mety ho fialantsasatra mahafinaritra indrindra amin'ny faran'ny herinandro, miaraka amin'ny toerana sy hevitra mahaliana ho an'ny mpivady.
Nilaza ny mpanakanto Salvador Dalí fa i Cadaqués no tanàna tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Angamba misy olona izay ...
Mandehandeha irery any Espana
Rehefa miatrika fitsangantsanganana irery ianao dia mety hipoitra mifangaro ny hozatra sy ny fihetsem-po manoloana ny tsy fantatra, ...
I Espana dia manana morontsiraka mihoatra ny 7.900 kilometatra. Ny toetrandro tsara eto amin'ny firenena sy ny toerana maro karazana ...
Molina de Aragón dia iray amin'ireo tanàna medieval tsara indrindra any Guadalajara (Espana). Any amin'ny avaratra atsinanan'ny faritany, ...
Inona no ho hita ao Formentera
Any atsimon'ny Ibiza, ny nosy Formentera no kely indrindra amin'ny Nosy Balearic ary ...
Inona no ho hita any Cantabria
Cantabria dia iray amin'ny toerana itodiana indrindra any Espana satria manambatra tendrombohitra, ranomasina, gastronomia ary kolontsaina. Toerana io…
Jerez de los Caballeros dia iray amin'ireo tanàna Espaniola farany ao amin'ny faritanin'i Badajoz alohan'ny hiampitana ny ...
Cercedilla, toerana akaiky an'i Madrid
Tsy lavitra an'i Madrid no misy ny tanànan'i Cercedilla, toerana iray nanjary malaza noho ny fizahan-tany ...
Ny iray amin'ireo faritra tsara tarehy indrindra amin'ny jeografia Catalan dia ny Delta del Ebro Natural Park any ...
Treviño, tanin'ny fiangonana voapaika vato
Ity herinandro ity dia mifantoka amin'i Castilla y León aho. Tamin'ny talata izahay dia niditra tao amin'ny valan-javaboahary Cañón Río Lobo ary ...
Ao afovoan'i County of Treviño (Burgos) ary efatra ambin'ny folo kilometatra miala ny faritanin'i Álava dia Ochate, ...
Làlana Ferro any Andorra
Iray amin'ireo làlana tsotra hanombohana ny ankizy amin'ny fitsangatsangana dia ny Ruta del Ferro ao ...
Ny zaridaina botanika any Santa Catalina
Iray amin'ireo toerana manokana indrindra any amin'ny faritanin'i Álava, Espana, ny Botanical Garden any Santa Catalina. Ary…
Eo am-poton'ny Sierra Morena ary 8 kilometatra miala an'i Córdoba no misy an'i Medina Azahara, ilay tanàna tsy fantatra izay ...
Any avaratra andrefan'ny faritanin'i Cáceres, akaikin'ny Cuacos de Yuste, no misy ny Monasiteran'i Yuste, toerana ...
Ny Sagrada Familia any Barcelona no tempoly katolika malaza indrindra amin'ireo mpizahatany izay tonga ao Barcelona ...
Ny fandraisana fiantohana mandeha amin'ny Paska dia hanome antsika tombony maro izay tsy maintsy fantatsika. Amin'izay dia afaka mankafy fitsaharana isika
Ny renirano tsara tarehy indrindra any Espana
Ny loharanon'ny renirano espaniola dia fahitana natoraly marina. Eto ianao vao mandre ny feo milamina an'ny ...
Lakes of Covadonga in Asturias
Asehonay anao ny zavatra rehetra hitanao ao amin'ny faritry ny farihin'i Covadonga, hita ao amin'ny Picos de Europa, ao amin'ny Principality of Asturias.
Inona no ho hita any Madrid
Madrid no renivohitr'i Espana, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny firenena ary ny faharoa ao amin'ny Vondrona eropeana manana ...
Inona no ho hita sy atao any Taramundi
Jereo izay azo jerena sy atao ao an-tanànan'i Taramundi, tanàna ambanivohitra any Asturias izay manome lova lehibe.
Tamin'ny taon-dasa ny Oceanogràfic an'ny tanànan'ny zavakanto sy siansa any Valencia dia nankalaza ny dimy ambin'ny folo taona ...
Fitsangatsanganana mahafinaritra miaraka amin'ny lamasinina Larrún
Tia lamasinina ve ianao? Misy mpankafy eran'izao tontolo izao ary tahaka ny mpanjakan'ny fitaterana dia ...
Tsena tsara indrindra any Espana
Na eo aza ny fiakaran'ny varotra an-tserasera, ny tsena nentim-paharazana dia mitazona io hatsarana mahatonga azy ireo ho toerana ...
Montparnasse Tower, ny fomba fijery avy amin'ny fomba fijery avo indrindra any Paris
Tsy tsiambaratelo fa i Paris dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Eropa, samy amin'ny haavon'ny ...
Senda Viva, valan-javaboary fialamboly lehibe indrindra ho an'ny fianakaviana ao Espana
Eo akaikin'ny Bárdenas Reales dia i Senda Viva, valan-javaboary natokana ho an'ny fialam-boly ankohonana ekena ho ...
Ireo mpankafy ski dia efa niondrana an-tongotra tokoa tao La Molina, toeram-pivarotana ara-panatanjahantena any Cerdanya, faritra ...
Ibiza miaraka amin'ny ankizy
Rehefa mieritreritra an'i Ibiza isika, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny nosy iray feno disko, trano fisotroana kafe ary coves ...
Fomba hisafidianana hotely hiarahana amin'ny ankizy
Lazainay anao ny lakileny hisafidianana tsara kokoa ireo hotely hiaraka amin'ny ankizy, izay tsy maintsy misy serivisy tena ilaina.
Fialan-tsasatra miaraka amin'ny ankizy
Manomana fialantsasatra ho an'ny fianakaviana ve ianao? Tsy mbola nanapa-kevitra ny amin'izay tianao haleha ve ianao? Miaraka amin'ireo hevitra izay ...
Drafitra miaraka amin'ny ankizy any Madrid
Ireo izay handany andro vitsivitsy miaraka amin'ny fianakaviana any Madrid dia azo antoka fa te-hanao drafitra miaraka amin'ireo ankizy, satria ...
Toerana fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro
Ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro dia mamela antsika hanao dia kely sy mahaliana. Mitadiava toerana hahaliana sasany amin'ireo fitsangatsanganana ireo.
Toerana fitsangatsanganana am-pitiavana
Mieritreritra ny hanao fialantsasatra miaraka amin'ny namanao ve ianao? Drafitra mampitambatra betsaka satria zaraina ...
Ny tanàna tsara tarehy indrindra any Cantabria
Cantabria dia vondrom-piarahamonina ahafahanao mankafy fitsangatsanganana mahatalanjona amin'ny alàlan'ny tanànany, mandray toerana mahafinaritra hahitanao ny fomban-drazany.
Facade an'ny University of Salamanca
Ny Oniversiten'i Salamanca, natsangan'ny Mpanjaka Alfonso IX avy any León tamin'ny 1218, dia heverina ho antitra indrindra ...
Mikasa mandritra ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy
Ny drafitry ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny ankizy dia tokony hankafizin'ny fianakaviana manontolo, noho izany dia manolotra hevitra tena samihafa sy mahafinaritra izahay.
Mikasa mandritra ny faran'ny herinandro ho mpivady
Ny finaritra amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny vadinao dia hevitra lehibe satria manampy amin'ny fanatsarana ny fifandraisana sy ny fisorohana ny fahazarana sy ny fahasosorana.
Fetsy hialana amin'ny fivarotan-dranomasina amin'ny sambo fitsangantsanganana
Mihabetsaka ny olona no voafitaky ny hevitra hoe handeha hitsangantsangana mandritra ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo….
Any amin'ny faritra atsimon'ny Sierra de Guadarrama, avaratra andrefan'ny Community of Madrid ary ao anatin'ny ...
Inona no ho hita any Plasencia, Cáceres
Ny tanànan'i Plasencia dia miorina ao amin'ny faritanin'i Cáceres ary manolotra volo ara-tantara sy manan-tantara kanto misy zavatra maro hita.
Làlan'ny Vohitra Fotsy any avaratry Cádiz
Ny fomba iray tsara hahafantarana an'i Espana atsimo, indrindra ny Andalusia, dia amin'ny alàlan'ny lalana mamakivaky ireo tanàna fotsy ...
Ny hantsana tsara indrindra any Espana
Ny morontsirak'i Espana dia misy morontsiraka fasika tsara sy rano milamina, nefa misy hantsana ...
Segóbriga, valan-javaboary arkeolojika any Espana
Maninona raha mandeha any amin'ity faran'ny herinandro ity ianao hijery ny valan-javaboahary Segóbriga Archaeological Park? Tranokala mahafinaritra izy io, miaraka amin'ny rava voatahiry tsara ary na dia ny fotoana hirosoana an-tongotra manodidina aza.
Tsidiho ny Somiedo Lakes ao Asturias
Ny Somiedo Lakes dia ao Asturias, ao amin'ny Somiedo Natural Park ary azo jerena noho ireo làlana fitsangantsanganana mahafinaritra sasany.
Cuevas del Soplao, lavaka mahatalanjona tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao
Fantatra amin'ny hoe Sistine Chapel of Geology, ny Caves Soplao dia iray amin'ireo tsangambaton'ny jeolojia ...
San Juan de Gaztelugatxe, fialantsasatra mahafinaritra
San Juan de Gaztelugatxe dia fialantsasatra mety indrindra amin'ny faran'ny herinandro, toerana iray izay toerana nahitana ny Game of Thrones ary eo akaikin'ny Bilbao.
Lagunas de Ruidera Natural Park, ny tsara indrindra eto amin'ny saikinosy
Ahoana ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro mankany Lagunas de Ruidera Park? Làlan-dranomasina manga sy maitso, ampifandraisin'ny riandrano sy renirano. Paradisa an-tany any Espana.
Raha mbola tsy fantatrao ny Tanàna Enchanted ao Cuenca dia tsy mahita fitsangatsanganana mahaliana ianao amin'ny alàlan'ny habaka voajanahary izay manolotra fananganana vato tsy mampino.
Fitsangatsanganana amin'ny mandan'i Lugo
Ho avy ny Paska ary azonao atao ny manararaotra izany mba hanaovana fitsangatsanganana any Lugo. Fantatrao ve ny rindrina? Izy io dia tranokala manerantany ary goavambe!
Làlana fitsangantsanganana any Madrid
Madrid no iray amin'ireo varavarana fidirana lehibe hahita an'i Espana. Momba ny renivohitra, miaraka amin'ny zavatra rehetra ...
Ny ala Irati, ala beech any Eropa lehibe indrindra aorian'ny ala mainty
Any avaratry Espana no hahitanao ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra any Espana. Tsy mila mandeha any ...
Hevitra 10 hanaovana fialantsasatra amin'ny Paska
Manome anao hevitra folo momba ny fitsangatsanganana izahay mba hanaovana ity Paska ity, any amin'ireo toerana any Eropa izay afaka ankafizina ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Ny Zorrilla Train, fomba iray hafa hahitana an'i Valladolid
Eo anelanelan'ny 3 febroary sy 24 novambra 2018, isaky ny sabotsy dia hiparitaka eo anelanelan'ny Madrid sy Valladolid ...
Ahoana raha miala amin'ny trano ambanivohitra isika?
Ahoana raha mankao amin'ny trano ambanivohitra isika amin'ity faran'ny herinandro ity na amin'ny tetezana fialantsasatra manaraka? Raha mbola tsy hainao ireo tanàna ambanivohitra ireo dia efa manararaotra fotoana ianao!
Ny Alhambra dia manokatra amin'ny besinimaro amin'ny volana Janoary ny efitranon'i Carlos V
Tamin'ny faran'ny taona 2016 dia voafidy ho tanàna tsara indrindra any Espana i Granada tamin'ny fifaninanana nokarakaraina tamina tambajotra ...
Fitsangatsanganana an-tsehatra amin'ny Sorolla House-Museum any Madrid
Voahodidin'ny zaridaina manintona iray ary miorina amin'ny tranobe tsara tarehy eny amin'ny arabe General Martínez Campos any Madrid, dia ...
Pizzerias tsara 5 hihinana pizza Neapolitan any Madrid
Mahaliana ny hoe ny sakafo teraka mba hampitoniana ny hanoanan'ny mponina sahirana indrindra ao Naples dia nandalo ...
100 taona taorian'ny nahitana ireo sary hosodoko an'ny zohy an'i Villar del Humo
Tamin'ny 2017, zato taona lasa izay taorian'ny nahitana ireo sary hosodoko an'ny lava-bato tao Villar del Humo, ao amin'ny faritany ...
Rinky ranomandry 8 hankafizanao amin'ny skating any Madrid amin'ny Krismasy
Amin'ity Noely ity dia fianakaviana maro no mitady hanararaotra ny fialan-tsasatry ny zanany kely mba hiara-manao voly sy drafitra samihafa. Y…
Valan-javaboahary 5 any Espana miaraka amina hatsarana manokana
Mandritra ny ririnina, araraoty ny hazavan'ny masoandro sy ny hafanan'ny masoandro hanaovana karazana hetsika ivelan'ny trano ...
Mandritra ny volana Novambra ary manokana, hanokatra ny Puerta de los ... ny Alhambra any Granada ...
Andro fialantsasatra romantika any Paris
Hankany amin'ny paris miaraka amin'ny namanao ve ianao? Ka andramo ny miaina fialan-tsasatra tena tantaram-pitiavana: fitsangatsanganana, fijerena, fisakafoanana, sakafo.
Fitsangatsanganana iray amin'ny ala Enchanted of Madrid eo anelanelan'ny dragona sy ny andriambavy
Manararaotra ny zava-misy fa mbola mankafy maripana mafana sy mamirapiratra masoandro i Madrid, drafitra mahafinaritra hatao mandritra ny faran'ny herinandro ...
Hevitra fialan-tsasatra amin'ny Halloween
Mitadiava hevitra vitsivitsy momba ny fialan-tsasatry ny tetezana Halloween ho an'ny drafitra mahafinaritra sy mampatahotra.
Ny tanàna tsara indrindra hitsidika ny faran'ny herinandro
Androany izahay dia tonga hiresaka momba ireo tanàna tsara indrindra hitsidihana mandritra ny faran'ny herinandro. Ny maritrano, ny hetsika ara-kolotsaina, ny gastronomie tsara ... Inona no tadiavinao?
Sancerre, fialantsasatra amam-pitiavana avy any Paris
Paris dia mitazona ny anaram-boninahitra tanàna be fitiavana indrindra eran'izao tontolo izao nefa mbola eo amin'ny manodidina azy ihany no misy toerana maro ...
Fitsidihana ny Juan Carlos I Park, havokavok'i Madrid maoderina
Tamin'ny volana Mey lasa teo, nankalaza ny faha-25 taona niorenany ny Juan Carlos I Park ho toy ny havokavoky ny Madrid maoderina….
Jereo ireto tanàna mahaliana 9 miorina amin'ny jeografia Espaniola ireto, zorony kely izay ahitanao zavatra betsaka amin'ny fialan-tsasatra.
Tsy mbola nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fahavaratra, fa ny hafanana any amin'ny faritra sasany any Espana dia manomboka ...
Misokatra ho an'ny besinimaro amin'ny 2017 i Casa Vicens an'i Gaudí amin'ny XNUMX
Amin'ny fararano manaraka, hanokatra varavarana voalohany ho an'ny besinimaro i Casa Vicens any Barcelona taorian'ny naha-onenana azy ...
Tanàna eropeana 5 ho fialan-tsasatra
Jereo ny tanàna eropeana dimy izay nanjary toerana mety amin'ny fialan-tsasatra faran'ny herinandro.
Hevitra 5 hialana amin'ny fialan-tsasatra
Raha ny tadiavinao sy ilaina dia ny mampifandray amin'ny fialan-tsasatra dia aza hadino ireo hevitra dimy nomaninay ho anao anio.
Amin'ny lohataona dia tonga ny masoandro, ny hafanana ary ny fipoahan'ny hery sy ny loko, noho ny voninkazo ...
Tonga any Valencia i Las Fallas, vonona ve ianao?
Manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 martsa dia hidoboka ao amin'ny Fallas, fety lehibe i Valencia. Seho afo ...
Volana tantely isaky ny vanim-potoana amin'ny taona
Ny volan-tantely dia io dia tsy manam-paharoa sy tsy azo tononina io izay hataon'ny mpivady vao vita mariazy a ...
Ireo zava-mahatalanjona ambanivohitra 7 any Espana
Jereo hoe iza ireo fahagagana 7 ambanivohitra any Espana. Tanàna ambanivohitra mahafatifaty fito nofidin'ny pejy Toprural.
Mandosira any Teruel na Verona amin'ity taona ity noho ny fitiavanao
Ny kaontinanta taloha dia nomena anarana ho fanomezam-boninahitra ny zanakavavin'i Agénor, mpanjaka fenisianina, izay nitaona an'i Zeus ...
Làlana ara-kolontsaina sy ara-tontolo iainana 3 any Espana ho an'ny 2017
Ny fotoana rehetra amin'ny taona dia tsara ho an'ny fialantsasatra, noho izany dia tsara ny miomana mialoha araka izay tratra ny ...
7 dia mikasa ny hankalaza ny taombaovao sinoa any Madrid
Manomboka amin'ny 13 Janoary ka hatramin'ny 17 Febroary, hankalazaina any Madrid ny Taombaovao sinoa, ka tsy ...
Fitsidihana ireo toerana misy ny vakoka eran-tany any Espana: nijanona tany atsimo tany Seville, Córdoba ary Granada izahay ary tao afovoan-tany Segovia sy Salamanca.
Ny Fallas of Valencia dia efa tranokala lova manerantany
Taorian'ny roa taona nampiroboroboana mafy tamin'ny fanohanana ny firotsahan'i Las Fallas ho lasa Lova tsy azo tsapain-tànan'ny ...
Toerana ho an'ny faran'ny herinandro faran'ny volana desambra
Ankafizo ireo tolo-kevitra momba ny dia nataonay ho an'ity tetezana ity amin'ny Desambra. Fitsangatsanganana mahafinaritra sasany amin'ny dia iray.
Toerana 5 mora vangiana amin'ny 2017
Ny nofinofin'ny mpandeha rehetra dia ny hahita an'izao tontolo izao. Mandehandeha eraky ny planeta, mahita tontolo miavaka, mianatra momba ny kolontsaina hafa ary manandrana ...
Fitsangatsanganana ho any Albarracín sy Teruel, tena fototr'i Aragonese
Amin'ireo faritany telo mandrafitra an'i Aragon dia i Teruel no mety tsy fantatra indrindra. Na izany aza, misy ilay iray ao amin'ny maro ...
10 amin'ireo toerana tsara indrindra any Galicia
Mitadiava toerana folo mahafinaritra indrindra ao Galicia, toerana voajanahary, jiro amin'ny faran'izao tontolo izao sy ny banky misy fomba fijery mahavariana.
Toerana mahafinaritra 5 hahaliana ny Halloween
Halloween, fialantsasatra mpanompo sampy velona indrindra amin'ny kalandrie, dia eto mandritra ny herintaona hafa. Ny fotoana, Hollywood ary ny fanatontoloana dia ...
Ny fararano dia fotoana mety hanaovana io fialantsasatra io izay efa niandrasantsika tany amin'ny zoro Espana sasany. Ny mari-pana…
Fitsangatsanganana an-tsokosoko any Alacati, any Torkia
Te handany andro tantaram-pitiavana vitsivitsy any amin'ny morontsirak'i Torkia ve ianao? Andramo i Alacati, tanàna tsara tarehy atolotra anao hitsidika amin'ny fararano.
Toerana majika 8 any Espana (I)
Mitadiava toerana majika valo any Espana, toerana manokana sy voajanahary izay hamoizanao tena hankafy tontolo hafa.
Miaina sy mizara ny zavatra niainanao momba ny Camino de Santiago
Ny Camino de Santiago dia iray amin'ireo làlana manandanja lehibe indrindra manerantany. Ampidiro dia homenay torohevitra ianao mba hahafahanao miaina azy io sy mankafy azy indrindra.
Fitsangatsanganana iray mamaky an'i Zafra, ilay tsy fantatra amin'ny Extremadura
Zafra dia iray amin'ireo tanàna malaza indrindra any Extremadura. Ny toerana misy azy atsimon'i Badajoz (anelanelan'ny tendrombohitra ...
Làlana 3 mamaky an'i Espana ho an'ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe
Ny vanim-potoana rehetra dia tsara raha handeha hanao traikefa nahafinaritra. Ankehitriny rehefa manakaiky ny fialantsasatra ho an'ny maro dia mety ho tsara ...
Ny fetibe teatra kilasika mahaliana indrindra amin'ny fahavaratra any Espana
Satria amin'ny fahavaratra i Espana dia tsy miaina amin'ny masoandro sy amoron-dranomasina ihany, mandritra ny fahavaratra dia ankalazana manerana ny ...
Làlana 3 hahafantarana ny Hells Throat any Cáceres
Azontsika atao ny mieritreritra fa ny toerana fantatra amin'ny hoe Hells Throat dia zoro maina izay voan'ny maripana ...
Fialana voly mankany amin'ny valan-javaboahary sy voajanahary ao Doñana
Ny valan-javaboary nasionaly sy voajanahary Doñana dia iray amin'ireo toerana izay tokony hanerena anao handeha, farafaharatsiny ...
Anio dia asehonay anao ny nosy vitsivitsy amin'ny farihy, toerana hafahafa miaraka amin'ny sary mahafinaritra mba ho very amin'ny fialantsasatra.
Toerana fito tena ilaina ao San Isidro
Isaky ny 15 May, mankalaza ny fetin'i San Isidro i Madrid. Izay nanomboka tamin'ny fivahinianana tany amin'ny ...
Notre Dame, ny firavaka gothic an'i Paris
Misy toerana eto amin'izao tontolo izao izay tsy mila fampidirana satria miteny ho azy ireo ny lazany. Raharaha ...
Drafitra fitsangatsanganana 10 ho an'ny Fetin'ny Reny
Manolotra anao zavamaniry lehibe folo izahay ho an'ny Fetin'ny Reny. Ankafizo ny hevitra mampiala voly amin'ny maha-fianakaviana mandalo an'i Espana anao.
Mandeha amin'ny zotra Gaudí mamaky an'i Barcelona
Miaraka amin'ny mpitsidika fito tapitrisa isan-taona, mbola tafapetraka ao an-tampon'ny tanàna i Barcelona amin'ny fisintomana lehibe indrindra ...
Zavatra ho hita sy hatao any Madrid amin'ny faran'ny herinandro
Lazainay aminao ny zavatra ho hita sy hatao any Madrid ao anatin'ny roa andro monja, raha miala sasatra amin'ny faran'ny herinandro ianao, mba hahitanao ny zava-dehibe.
Antony dimy lehibe tokony hahalala an'i Teruel
Amin'ireo faritany telo mandrafitra ny vondrom-piarahamonin'i Aragon dia i Teruel angamba no tsy fantatra loatra. Na izany aza, ...
Raha misy toerana mahafinaritra any Espana, izay tsy maintsy dinihinao farafaharatsiny indray mandeha amin'ny fiainanao, raha mbola tsy ...
Inona avy ireo zavatra tokony hoentinao raha mandeha mitoby ianao
Ankehitriny, miaraka amin'ny fahatongavan'ny lohataona sy ny toetr'andro mahafinaritra, maro ireo izay sahy miala ...
Na eo aza ny zava-misy fa ny fizahan-tany ara-tsiansa dia mbola incipient any Espana, maro ny olona liana hitsidika ...
Fialan-tsasatra akaikin'i Madrid
Mieritreritra fialan-tsasatra any akaikin'i Madrid? Manolotra anao toerana itodiana izahay hahita tanàna mahafinaritra manakaiky ny renivohitr'i Espana. Jereo izy ireo
Ny farihy na ny boriborin'i Tristaina dia vondron'ny farihy hita ao amin'ny tanànan'i Andorran any Ordino ary eo amin'ny 2300 metatra ny haavony.
Ao anatin'ny hafanan'ny onja mangatsiaka polar izay ahitantsika ny tenantsika sy ny Paska manodidina ny ...
5 mikasa ny hankafy ny hafanana amin'ny Paska
Mitadiava toerana hahitana ny hafanana amin'ny Paka. Toerana dimy misy toetrandro tsara ary miaraka amina filaharana, tsangambato na torapasika.
Ny lalan'ny Emperora Charles V any Extremadura
Ny fotoana rehetra amin'ny taona dia fotoana mety hanombohana traikefa nahafinaritra. Manamarika ny fitsingerenan'ny ...
Bora Bora, paradisa hafahafa any Polinezia frantsay
Nanjary iray amin'ireo toerana tsara indrindra i Bora Bora raha te hankafy ny ...
Amin'ny Andron'ny mpifankatia, manidina amin'ny balaonina misy rivotra mafana eraky ny Madrid ary ankafizo ny fomba fijery
Zavatra 6 hita any Roma amin'ny faran'ny herinandro
Satria efa nandany ny fialantsasatra lehibe isika, ary mbola lavitra ny fahavaratra, mety hanana elanelana amin'ny ...
Ahoana ny fomba hankalazana ny Andron'ny mpifankatia any Madrid sy Barcelona
Torohevitra sy tolo-kevitra hankalazana ny Andron'ny mpifankatia ao Madrid sy Barcelona
Fialantsasatra ho an'ny andron'ny mpifankatia
Heveriko fa tsy izaho irery no mametra-panontaniana ankehitriny mitovy amin'ilay zavatra nangatahinay tamin'ny ...
Hotely misy drafitra samihafa amin'ny Andron'ny mpifankatia
Na dia mieritreritra ny fahafinaretana amin'ny karnavaly aza isika, raha manana mpiara-miasa dia tokony manomana zavatra iray andro ...
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba handaminana fitsangantsanganana an-dranomasina amin'ny renirano Danube
Fitsangatsanganana mankany Las Alpujarras Granada
Fitsangatsanganana mankany Las Alpujarras any Granada, izay hitondrana anao any amin'ny tanàna samihafa any Granada, Almería ary Málaga.
Eiserner Steg, ilay tetezana vy any Frankfurt
Ny Eiserner Steg na Iron Bridge, dia iray amin'ireo toerana tsy azontsika hadino amin'ny fitsidihanay an'i Frankfurt, kilasika amin'ny fizahan-tany.